Maqaallada Wesley Faulkner ee Martech Zone |
Maqaallada by Wesley Faulkner
Khibradda Wesley Faulkner waxay ku fidsan tahay wajiyo badan oo ka mid ah warshadaha teknolojiyadda, laga soo bilaabo soosaarka illaa horumarinta wax soo saarka. Jacaylka uu u qabo tikniyoolajiyadda waxaa lagu kobciyay in ka badan saddex iyo toban sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan taageerada adeegga farsamada iyo macaamiisha, injineernimada goobta, iyo horumarinta madadaalada warbaahinta dhijitaalka ah. Dhawaan, Wesley wuxuu laamiga u galay baraha bulshada. Wuxuu marti ku ahaa dhowr warbaahin mareegaha sida CNET iyo Tech in Twenty. Iyada oo qayb ka ah La-Taliyaha Warbaahinta Bulshada, ka dibna isagoo ah Wacdiye Warbaahinta Bulshada ah wuxuu ka caawiyay horumarinta istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada ee AMD wuxuuna gacan ka geystay soo bandhigidda iskaashiyo ganacsi oo cusub.